ဘာသာရေးဖျက်ဆီးသူများ ရဲ့ NO 1 စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းက ဖွင့်ပြပြီး ကခုန်ခိုင်းတဲ့ တရုတ်သီချင်းက အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဘာသာရေးဖျက်ဆီးသူများ ရဲ့ NO 1 စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းက ဖွင့်ပြပြီး ကခုန်ခိုင်းတဲ့ တရုတ်သီချင်းက အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့။
ဘာသာရေးဖျက်ဆီးသူများ ရဲ့ NO 1 စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းက ဖွင့်ပြပြီး ကခုန်ခိုင်းတဲ့ တရုတ်သီချင်းက အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့။
Posted by နွယ်ပင် on Jan 17, 2011 in Myanma News, News | 17 comments
စာသားတွေထဲက တစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းလောက် ဘာသာပြန်ရရင်တော့ “စည်းကမ်းတွေများနေတယ် ချွတ်ပြစ်လိုက် ချွတ်ပြစ်လိုက် ” နောက်ဆုံး “အပေါ်အဝတ်တွေ အောက်ခံတွေပါ ချွတ်ပြစ်လိုက် ချွတ်ပြစ်လိုက်” လို့ ဆိုနေတာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
ဒီသီချင်းရဲ့ မူရင်းသီချင်းကတော့ ဂျပန်သီချင်း アゲアゲEvery ဆိုတဲ့ DJ OZMA အဖွဲ့ရဲ့သီချင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆မှာ အင်မတန် ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်..။ နှစ်စဉ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နှစ်သစ်ကူးညတိုင်း မှာ ထုတ်လွှင့်ပြီး ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးက ကြည့်ရှု့အားပေးကြတဲ့ NHK CHANNEL ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ၂၀၀၆ နှစ်သစ်ကူး နယူးရီးယား အကြိုညမှာ တခြားနာမည်ကြီး အဆိုတော်အဖွဲ့များနဲ့အတူ NHK က Live Show ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ပါတယ်။ DJ OZMAအဖွဲ့မှ အဆိုပါ アゲアゲEvery သီချင်းနဲ့ သီဆိုကပြရင်း နောက်ဆုံး သီချင်းအပိတ်မှာ ယင်းအဖွဲ့ရဲ့ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးတွေပါမကျန် အပေါ်အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်လိုက်လို့ နောက်တစ်နေ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးမနက် ဂျပန် သတင်းစာတွေမှာ အဆိုပါနေ့က သတင်းဓာတ်ပုံများ အကြီးအကျယ် ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။ သတင်းနဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမှာ တခြား Channel များနဲ့မတူ အင်မတန်မှ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ NHK ရုပ်သံဋ္ဌာနနဲ့ အဆိုပါနေ့က DJ OZMAအဖွဲ့ အဆိုတော်များရဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော် ပြသနာတက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ DJ OZMA အဖွဲ့မှလည်း ပြန်လည် ဖြေရှင်းမှုတွေ တော်တော် လုပ်လိုက်ရပါတယ် ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ သာသနာတော်ကတော့ အားလုံးသိပြီးတဲ့ အတိုင်း အင်မတန်မှ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဓမ္မန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါပြီ။ အခုလဲ သာသနာ့ အရေခြုံ အတုအယောင်က စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုပြီး သာသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးနေပြန်ပါပြီ။
နံပါတ်ဝမ်းကို ဖွင့်လှစ်ဦးဆောင်နေတဲ့ ရဟန်းဟာ အတုအယောင်မဟုတ်ပါဘူး.. တရားကိုတကယ်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ရဟန်းပါ ပျဉ်းမနားကပါ သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို သင်ကြားပြသပေးတဲ့သူပါ.. ဒီသင်တန်းကိုဖွင့်တဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘုရားတစ်ဆူတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ရဟန်းတပါးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာကနေကြတဲ့အချိန်ဟာ သင်တန်းသားတွေ စိတ်ဓါတ်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်..ဘုရားရဲ့တရားတော်တိုင်းဆိုရင် တော့ မကိုက်ညီပါဘူး.. ဆရာတော်ရဲ့သင်တန်းတစတစအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဆရာတော်ရဲ့ဘေးမှာ နေကြတဲ့ သူတွေက လောဘတက်လာတယ် ..ငွေတွေဖြောင်လာတယ်.. ကျနော်သိထားတာက တော့ ယခုဆရာတော်ဟာ သာမညတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ၀ိပသာနာတရားတော်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်သူပါ.. ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီလိုကျနော် ထင်ပါတယ်.. ဒီသင်တန်းဖွင့်နေတာကြာပါပြီး အခုမှာ သတင်းတွေ ဖြစ်နေပါတယ်.. ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုကလည်း လိုချင်တာကို ဖြတ်ပြီးပြထားသလို.. ရိုက်ထားတဲ့သူကလည်း သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဆရာတော်ကသာသနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက် သူနည်းသူဟန်နဲလုပ်ပုံရပါတယ်.. ဒါကျနော်သိသလောက် မျှဝေတာပါ..
ဟေ့… အဲ့ဒီသံဃာတော်မှာ တရားအားထုတ်ဖို့ရော အချိန်ရှိရဲ့လား။
အခုလို ဝေမျှတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာတော်က သဲအင်းဂူတပည့်ဆိုလို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သူ့အကြောင်းသိရင် ပို့စ်ဖြစ်ဖြစ် အင်တာဗျူးဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးပါလား။ ကျနော်က လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာကို ရောက်နေလို့ပါ။
ရဟန်းနဲ့ မဆိုင် ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေမှန်းကို မသိဘူး
အောက်ကစာတွေကို .. ကိုမိုးသီးဇွန်ဘလော့ကကူးယူပါတယ်..။
ရွာသားတွေ အသိအမြင်တခုရစေလိုရင်း ဆန္ဒသာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့.. မှန်၏မမှန်၏ လက်ခံမခံ ကိုယ်တိုင်အတွေးအမြင်နဲ့ .. သုံးသတ်ကြရန်သာဖြစ်ပါကြောင်း..။
ရဟန်းဆိုတာ သီလယူရပါတယ်။ သီလထဲမှာ ကခုန် တီးမှုတ် အပျော်အပါး ရှောင်ပါမယ် ဆိုတဲ့ သီလ ပါပါတယ်။
အခု ဦးဆောင်နေတာ ရဟန်း ဘုရားသားတော် ဗုဒ္ဒဘာသာစစ်စစ် ဟုတ်ရင် ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူး။
စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ပေးဖို့ တရားထိုင်မယ်။ လုပ်အားပေးမယ် စာသင်ပေးမယ် ဆိုရင် ကြည်ညို ကြမှာပါ။ အခုတော့အကသင်တန်းကို ဦးစီးရတယ် လို့ ဒါ ဗုဒဘာသာဝင်ရဟန်းအလုပ်မဟုတ်ပါ
မထိတထိနှင့် ဝေ့၀ိုက်ပြီး မပြောပါဘူး။ တစ်ယောက်လမ်း တစ်ယောက်မပိတ် ပါဘူး။ ကုလားဘုန်းကြီး ဆိုတဲ့အပြောတစ်ခုကိုသာ ခင်ဗျားတို့ ဇာချဲ့ပြီး လူမျိုးရေးတွေဘာတွေ ပေါက်ကရ လေးဆယ်လျှောက်ပြောနေတာ။ လူတွေ ဝေဖန်တာက ဘုန်းကြီးရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ လမ်းလယ်ခေါင် ရှူးရှူးပေါက်သလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
ကိုခိုင် ကိုမိုးသီးဘလော့ကနေ တဆင့်ကူးရေးလိုက်တာကို အရမ်းသဘောတူပါတယ်။ ကျနော်လည်း စစ်တပ်ကိုမုန်းပါတယ်။ သင်တန်းရဲ့ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်မှုကိုလည်း မနှစ်သက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါအတွက်နဲ့တော့ အရမ်းကာရော ဝေဖန်နေတာတွေကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဒါကူးစကီးဆိုသူ ပြောသလို သင်တန်းဖွင့်လာတာ ကြာနေပြီ အခုမှ သတင်းဖြစ်တာကို မမေ့ကြပါနဲ့။ ကျနော်ရှေ့နေလိုက်နေခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မသိသေးခင်မှာ အရမ်းကာရော စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ကြမယ်ဆိုရင် အကျိုးထက် အပြစ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ကုလားပြည်မှာ ပွင့်ခဲ့တာကို မမေ့ကြပါနဲ့။
ဖတ်ပြီး ဘ၀င်မကျတာကလည်း အမြင်မတော်လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ … အဲ့ဒီလို လုပ်ရပ်တွေအပေါ် ဝေဖန်တဲ့အခါမှာတော့ လူမျိုးရေးတွေပါ ဆွဲတွေးကုန်ကြတာပါ …။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်က ဘယ်လို အကျိုးသွားတွေဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတာ ကာယကံရှင် ပြုလုပ်သူက သတိထားမိရင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ ။
( ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်တဲ့ အနေထားမျိုးမို့ ၀င်ရေးသွားသည် )
အမှန်က ဒီပို့စ်ကိုတင်တာက လူမျိုးရေးတွေဘာတွေမပါသလို ကုလားဘုန်းကြီးဆိုပြီးလဲ မသုံးနုန်းထားပါဘူး ဘုန်းကြီး တစ်ပါးဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဒီလိုလုပ်ရပ်လုပ်တာကို သိပ်ပြီးဘဝင်မကျလို့ပါ . သာသနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက် ဆရာတော်က သူနည်းသူ့ဟန်နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုရင်လဲ ဒီလို အကသင်တန်းကိုတော့ မလုပ်ခိုင်းသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် .ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ဝင်မကတာကတော့မှန်ပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ ဒီသင်တန်းကိုသင်ပေးတာက ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်လေ ။ ဒါပေမင့် လူတစ်ကိုယ် အမြင်တစ်မျိုးမို့ ကြိုက်သလို သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ် ….
လူထွက်ပြီးတော့ လုပ်ချင်တာလုပ် ဘာမှ မပြောဘူးဟေ့………..။ သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ ဘာမှ မဟုတ်တာမလုပ်နဲ့…။ ကုန်ကုန်ပြောမယ် သင်္ကန်ဝတ်ပြီး ဗေဒင်ဟောတဲ့ ဘုန်းကြီး ၊ သင်္ကန်းဝတ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ ဘုန်းကြီး၊ သင်္ကန်ဝတ်ပြီး..ချဲဂဏန်းပေးတဲ့ ဘုန်းကြီး…။ သင်္ကန်းဝတ်ပြီး..ညစာစားတဲ့ဘုန်းကြီး ဘယ်ဘုန်းကြီး မှ ဘုန်းကြီးလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။..ဒီလူတွေကို သာသနာဖျက်လို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ တစ်ခြားဘာသာတွေ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို လက်ညိုးထိုး အပြစ်ပြောခံရမယ် လုပ်ရပ်မျိုးလုပ်တဲ့ မည်သည့် အယောင်ဆောင်ကိုမှ လက်မခံပါ။ နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ မင်းသားကျော်ဟိန်း… သူရဲ့ မတတ်တခေါက် အသိစိတ်ကူးတွေနဲ့ တရားတွေဟောပြီး..ဘာသာကိုအယူလွဲအောင်လုပ်နေတာတွေ၊ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတာတွေအားလုံး ဆန်ကျင်တယ်။
ဦးအာဂ လို ရဲရဲတောင် သာသနာ ပေါ် တွေးတဲ့ စိတ်မျိုးကို လေးစားပါတယ်။ ကောက်ညှင်းထဲ ကြွက်ချေး ရောသလိုမျိုးတွေက ဖယ်ထုတ်လည်းခက်.. မဖယ်ဘဲ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံ ကြည့်နေတဲ့ သူတွေက များလား.. ဦးအာဂ လို စိတ်မျိုး ရှိတဲ့ လူတွေ များလာရင်တော့.. ပိုပြီး အရောင်လက်လာလိမ့်မယ်။
မှန်လိုက်တာကိုအာဂရယ် အကလေ့ကျင့်ခန်းပါတဲ့ဒီသင်တန်းကိုသာမန်လူကပေးယင်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး ခုတော့ဗျာဘုန်းကြီးဝတ်ကြီးနဲ့ ………